ह्यान्डमेड टेल, मार्गरेट एटवुडको विवादास्पद बेस्टसेलर | वर्तमान साहित्य
द हन्डमेड कथा
जुआन अर्टिज | | विज्ञान कल्पना, किताबहरु, नोभेला
द हन्डमेड कथा क्यानाडाली लेखक मार्गरेट एटवुडको उपन्यास हो। यो १ 1985 XNUMX को पितरमा उसको जन्मभूमिमा प्रकाशित भएको थियो र लाखौं प्रतिहरू बिक्रि भए पछि ठूलो सफलता साबित भएको छ। डिस्टोपियसका प्रेमीहरूले यस शीर्षकलाई विधाको क्लासिक मान्दछन्, किनकि यो भयावह रहस्य भएको आकर्षक कथा हो।
यो कथा काम एक विश्वव्यापी संदर्भ हो; यसको विषयवस्तु र कच्चा तरीकाले यसले महिलाहरूमाथिको विभेद देखाउँदै ठूलो प्रभाव पार्‍यो। यो त्यस कारणले हो यो धेरै अवसरहरूमा अनुकूलित गरिएको छ, दुबै चलचित्र, टेलिभिजन र थिएटरको लागि; ओपेरा को लागी एक संस्करण छ। श्रृंखला प्रारूप मा यसको प्रतिनिधित्व बाहिर छ - Hulu द्वारा उत्पादित र एलिसाबेथ Mo— तारांकित, जसको तेस्रो सत्र वर्तमानमा प्रसारित छ।
1 द हन्डमेड टेल (१ 1985 XNUMX)
1.1 कामका सामान्य पक्षहरू
1.1.1 शासनले महिलालाई विभाजित गर्दछ
1.1.2 पुरुषको प्रतिनिधित्व
2.3 साहित्यिक दौड
2.4 थप कामहरू
द हन्डमेड कथा (1985)
यो एक डिस्टोपियन भविष्य र विज्ञान कथा उपन्यास हो२१ 2195 XNUMX मा अनुमान गरिएको। यो छ गिलियड गणराज्य मा सेट, अमेरिकी सरकारको बिरूद्ध कुठ पछि गठन। त्यहाँ बाइबलको पुरानो नियममा आधारित कडा तानाशाही रहेको छ। यो काम मा यो प्रतिबिम्बित छ एक सामाजिक tirade र महिला विरुद्ध कडा भेदभाव।
इतिहास अफर द्वारा पहिलो व्यक्तिमा बयान गरिएको छको आज उनको जीवन याद गर्दछ र आफ्नो विगतका अंशहरू सम्झन्छ गिलियडको संस्था अघि। उनी, सबै महिलाहरु जस्तै, एक विशेष समारोह पूरा गर्न खटाइएको थियो, उनको विशेष अवस्थामा उनी समूहको हुन दासीहरू.
दुलहीको टेल ...
कामका सामान्य पक्षहरू
शासनले महिलालाई विभाजित गर्दछ
महिला प्रति दमन र प्रभुत्व को एक उपाय को रूप मा, नयाँ शासनले उनीहरूलाई त्यो समाजमा खेल्ने भूमिका अनुसार विभाजन गर्ने निर्णय गर्दछ। यी प्रकार्यहरू छुट्याउन, प्रत्येक छ वटा स्थापित समूहहरू तिनीहरूको लुगाको रंगद्वारा भिन्न छन्।
दासीहरू SAs Offred— तिनीहरूले रातो लुगा लगाउँदछन्, यसको कार्य भनेको कमाण्डरको बच्चाहरु संसारमा ल्याउनु हो। अर्कोतर्फ, पत्नीहरू कुलीन वंशका महिला हुन् र तिनीहरूले निलो पोशाक लगाउँछन् वर्जिन मरियमको समानता। उनीहरूले शान्त र आरामदायी जीवनको आनन्द लिने भए पनि, उनीहरूका सन्तानहरू सुनिश्चित गर्नका लागि दासीहरू भर पर्छन्।
ती नाम दिए "Aunts" तिनीहरू हेर्छन् खैरो लुगा, तिनीहरूले नोकर्नीहरूको सुपरिवेक्षण गर्छन् र सुनिश्चित गर्दछन् कि उनीहरूले नियमहरू पालना गर्छन् कि छैनन् भने सजाय दिन सक्षम छन्। त्यहाँ अर्को ग्रे-हरियो समूह पनि छ "मार्था", जो, उनीहरूको उन्नत उमेरका कारण, उत्पादन गर्न सक्दैन; उनको काम कमाण्डरहरूको परिवारको लागि खाना पकाउन र सफा गर्नु हो।
अन्तमा, ती हुन् "econowives", को उपयोग गर्ने धारीदार पोशाक र छन् गरीब मानिसका स्वास्नी। तिनीहरूले सकेसम्म सबै गर्नु पर्छ। बाँकी महिलाहरूलाई "गैर-महिला" मानिन्छ, जसले उनीहरूको अन्धकार विगतको कारण यातना दिइन्छ र उनीहरूको मृत्यु नभएसम्म सीमातर्फ निर्वासित हुन्छन्।
मान्छेआफ्नो पक्षका लागि तिनीहरू हुन् तिनीहरू तानाशाही सरकारमा कमान्ड लिन्छन्। शासन चलाउनेहरूलाई सूचीबद्ध गरिएको थियो "कमाण्डर", र कालो लुगा लगाउनु पर्छ। तिनीहरू पनि छन् द एन्जिल्स ", को गिलियड सेवा.
दि अभिभावक ", बदले, छन् कमाण्डरहरु को सुरक्षा को लागी ती। र अन्तमा, "भगवानका आँखा" को हुन् तिनीहरू हेर्छन् infidels गर्न निर्धारित आदेश कायम गर्न।
भविष्यको युगमा, को हत्या वास्तविक संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिले एउटा विद्रोह गर्न उक्साए. तानाशाही सरकार स्थापना गरिएको छ, र देश को रूपमा नाम छ "गिलियड गणराज्य"। त्यस समयमा, प्रदूषणले गर्दा हुने क्षतिको कारण, महिलाहरूको उर्वरता दर द्रुत रूपमा घट्यो। यसले गर्दा महिलाको अधिकारमा आमूल परिवर्तन भयो।
अफर गरियो एक युवती हुन् मेजर फ्रेड वाटरफोर्डको दासी जस्तो जीउ र उनकी श्रीमती सेरेना जोय, जो बाँझी छ। एला, यसको समारोह द्वारा निर्धारित रूपमा, विवाहको जेठो सन्तानलाई संसारमा ल्याउन परिवार भित्र छ। धेरै कल्पना गर्न असफल कोसिस पछि, प्रस्ताव एक चिकित्सा परामर्श मा भाग लिन्छ। त्यहाँ उसले सिक्यो कि समस्याको जड फ्रेडमा छ।
अवस्थाका कारण, उपचार गर्ने डाक्टरले अफरार्डलाई गाह्रो प्रस्ताव गर्दछ, जुन उसले स्वीकार गरेन। नियमित मा, सेरेना आफैंले उनलाई परिवारको मालीसँग सम्बन्ध राख्न बाध्य पार्छिन्, सबैको लागि कि म यति धेरै चाहन्थें कि छोरा प्राप्त गर्न। यो सम्बन्ध फस्टाउँछ र कमाण्डरको साथ अफ्रेडको जीवन अधिक गाह्रो बनाउँछ। धेरै चीजहरू हुन्छ जब सम्म सबै चीज सामान्यमा फर्कदैन।
कवि र लेखक मार्गरेट एटवुडले शनिबार, नोभेम्बर १,, १ 18। On मा क्यानाडाको ओटावामा पहिलोपटक ज्योति देखे। उनी प्राणीशास्त्री कार्ल एडमन्ड एटवुड र पोषण विज्ञानी मार्गरेट डोरोथी विलियमकी छोरी हुन्। उसको बाल्यावस्थाको अधिकांश भाग उत्तरी क्यूबेक, ओटावा र टोरन्टो बीचमा बित्यो, वनकोशशास्त्रीको रूपमा आफ्नो बुबाको कामबाट प्रेरित।
एक सानो बच्चाको रूपमा, मार्गरेट उनी पढ्ने प्रशंसक थिइन्; उनी आफैंले स्वीकारेकी छिन् धेरै अवसरहरूमा सबै प्रकारका साहित्यिक विधाहरू पढेका छन्। उनले रहस्य उपन्यास, हास्य, विज्ञान कथा, र क्यानेडाली ईतिहासमा पुस्तकहरूको आनन्द लिन सके। अन्तत: प्रत्येक व्यक्तिलाई उनको लेखकको रूपमा प्रशिक्षणमा धेरै उपयोगी थियो।
उनको माध्यमिक अध्ययन टोरोन्टोको Leaside हाई स्कूल मा थियो। सन् १ 1957 .XNUMX मा उनी प्रवेश गरे भिक्टोरिया विश्वविद्यालय; त्यहाँ, पाँच बर्ष पछि, अंग्रेजी फिलोलजीमा स्नातक डिग्री प्राप्त गर्नुभयो, फ्रान्सेली र दर्शनमा थप अध्ययनको साथ। उही वर्ष, उनी हार्वर्ड विश्वविद्यालयको र्याडिफ कलेजमा स्नातकोत्तर डिग्रीको लागि वुड्रो विल्सन रिसर्च फेलोशिपको लागि भर्ना भए।.
लेखक दुई विवाह भएको छ, पहिलो १ Pol .1968 मा जिम पोल्कको साथ, जसबाट उनी5बर्ष पछि सम्बन्ध विच्छेद गरे। समय पछि, बिहे भयो उपन्यासकार ग्रिम गिब्सनसँग। १ 1976 XNUMX मा, यस युनियनको परिणामस्वरूप, उनीहरूको एक छोरी भयो, जसलाई उनीहरूले बप्तिस्मा गरे: एलेनोर जेस एटवुड गिब्सन। त्यस समयदेखि अहिलेसम्म यो परिवार टोरन्टो र पेली टापु, ओन्टारियोको बीचमा बस्दछ।
एटवुडले १ writing बर्षको उमेरमा लेख्न शुरू गरे। यो एक विशिष्ट लि .्ग छैन त्यो तपाईं विशेषताहरू; उपन्यास प्रस्तुत गरेको छ, निबन्धहरू, कविताहरू र टेलिभिजनका लागि लिपिहरू। त्यस्तै, उनलाई धेरै नारीवादी साहित्यकारले विचार गरीरहेकी छ, किनभने उनका सबैभन्दा सफल कामहरू थिममा आधारित छन्।
त्यस्तै, उनले आफ्नो देशसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा काम गरेका छन्, जस्तै: क्यानाडाली पहिचान, यसको मूल ढोका र वातावरणीय पक्ष। यसै गरी, उनले उक्त राष्ट्रसँग अन्य देशहरूसँगको सम्बन्धको बारेमा लेखेका छन्। उनका कार्यहरूमा गणना गर्न सकिन्छ: १ 18 उपन्यास, २० कविता पुस्तकहरू, १० निबन्ध र छोटो कथाहरू, children's बालबालिकाका पुस्तकहरू र विभिन्न लिपिहरू, लिब्रेटोस, ई-पुस्तकहरु र अडियोबुकहरू।
उपन्यासकार, साहित्यको अतिरिक्त, उनले आफूलाई अन्य पेसामा समर्पण गरेका छन् जसमध्ये विश्वविद्यालयको प्राध्यापकको रूपमा उनको काम स्पष्ट छ। एटवुडले क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाका प्रतिष्ठित अध्ययन घरहरूमा सिकाएको छ। तिनीहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ: ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालय (१ 1965 1969), न्यु योर्क विश्वविद्यालय र अल्बर्टा विश्वविद्यालय (१ 1979 XNUMX -XNUMX -१ XNUMX)))।
त्यसै गरी, साक्षरता क्यानाडाली राजनीतिक कार्यकर्ता हो। यस पक्षमा, को लागी लडेको छ विभिन्न कारणहरू, जस्तै: मानव अधिकार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र वातावरणीय कारणहरू। यो कठिन काम उसको देश र अन्तर्राष्ट्रिय दुबैमा गरिएको छ।
हाल यो एमनेस्टी इन्टरनेसनलको हो (मानव अधिकार निकाय) र को एक मुख्य हिस्सा हो बर्डलाइफ अन्तर्राष्ट्रिय (चराहरूको रक्षा)।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » द हन्डमेड कथा